Uwe mkpuchi akwa clothes Uwe na-arụ ọrụ • Ihe mkpuchi kọmputa P&M
Uwe nchedo Ezubere iji hụ na nchekwa mgbe arụ ọrụ. Ha bụkwa ihe achọrọ nke usoro ahụike na nchekwa. Ojiji eji ihe eji eme ihe nchoputa di otua ma obu ihe eji acho oru.
Inye ụlọ ahịa anyị, dị ka akụkụ nke uwe nchebe, ị nwere ike ịzụta nkpuchi na-echebe, okpu, uwe a na-eji ihe acid eme (maka ndi mmadu ji kemikal siri ike mee ya) na uwe ndi eji osisi (uwe ogologo na nkpuchi).
N'ihi iji ihe ndị dị elu eme ihe, uwe nchebe na-eguzogide mmebi, mmetụta na-emerụ ahụ nke ihe ndị metụtara ọrụ a rụrụ, ma na-eguzogide ọgwụ na-ehicha ma ọ bụ na-asacha ugboro ugboro. A na-eji ngwa eji echekwa ihe nchekwa maka ihe ha chọrọ, ihe niile iji hụ na nchekwa onye ọrụ. Ohere dị ukwuu nke ị dozi uwe na-eme ka o doo anya na ọ ga-adabara ọtụtụ ụdị ọgụgụ na ndị dị elu dị elu.
Uwe nchedo maka nchebe na nkasi obi nke ọrụ
Uwe eji akwa PVC (acid-echebe) na-eguzogide ọgwụ. Emere ya maka iji ya mee ihe ebe enwere ihe ichoro na ihe ndi di ka acids, bases na hydroxides. Uwe nchedo enyere na ụlọ ahịa anyị na-ezute ihe ndị chọrọ nke EN13688, EN14605. Uwe mkpuchi ahụ gụnyekwara akwa maka agbụ ígwè iji chebe ya pụọ ​​na mmerụ ahụ (traụza). Ekike mejupụtara jaket na traụza nwere ọtụtụ nkọwa iji debe ụkpụrụ nchekwa kacha elu. A na-akwado ịtọ ntọala maka ndị na-egbu osisi ma ọ bụ ndị na - eji chainsaw - na - ezute ihe achọrọ nke EN13688 na EN381-5 (klas 2 (traụza)).
Anyị agwaogwa mejupụtara oge a na onye na-echebe uwe mere nke heavyweight owu na ngwakọta nke sịntetik ihe. Ihe a kapịrị ọnụ nke ọrụ n'ọtụtụ ọrụ na ọnọdụ nke arụmọrụ ha pụtara na ụdị anyị na-enye na-echebara ihe ndị a chọrọ, na-agbanwe ihe gbasara mkpa onye ọ bụla ahọrọ.
Ejiri akwa mkpuchi pụrụ iche nwere ọtụtụ ihe na-eme ka eji ha eme ihe. Maka nkasi obi, eji ha obere akpa, ihe ndi zoro ezo iji hazie akwa ha, na ebe ha ga-agba ha ka ha wee kpuchido ihe ndi na –eme ka aru oru.
Tupu ịzụrụ ihe n'aka anyị ụlọ ahịa anyị na-akwado ịkpọtụrụ anyị iji gosi na ngwaahịa dị na onye nrụpụta anyị. Ndị ọrụ anyị nwere ike ịnwe ndụmọdụ maka ịhọrọ uwe.
Uwe nchekwa betaihe nkiri nchebeuwe ndị nwere ike ịtụfuuwe mkpuchi ahụikemkpuchi maka uweUwe nchedoUwe nchedouwe nchebe maka ụmụakauwe mkpuchi maka ndị ọrụ ọkụ eletrikuwe nchebe maka ndị dọkịtauwe nchebe maka weldersuwe nchebe maka ndị na-ahụ maka anụ ahụuwe mgbochiuwe mkpuchi maka ịgbauwe nchebe nke husqvarnauwe ndị nwere ike ịtụfuUwe nchedo na kielceuwe mkpuchi ahụikeuwe nchebe maka kịtịkpaUwe nchedo PPEuwe mkpuchi nke welderna-echebe uwendị na-egbochi ọkụngalaba nchekwa ọkụuwe ọrụ nchebeakpa nchedo